> Resource > Beddelaan > Top 20 Players MP4
Ma ciyaari karo files MP4 on your computer, phone daaqadaha, ama Windows Media Player? Haddii ay sidaas tahay, waxaad ka fiirin kartaa xal halkan. Waxaa jira xalal kala duwan ku bixiyeen in this article. Waxaad isku dayi kartaa mid inaad la xaliso dhibaatadaada loo maqli MP4 sida ay u gaar ah oo aad jeceshahay.
Qeybta 1: Top 20 Players MP4 for Mac, Windows, macruufka iyo Android
Qaybta 1.1: Top 5 Players MP4 for Windows
Qaybta 1.2: Top 5 Players MP4 for Mac
Qaybta 1.3: Top 5 Players MP4 ee macruufka
Qaybta 1.4: Top 5 Players MP4 for Android
Qeybta 2: Download Free Videos la Wondershare AllMyTube
Iyada oo la sii daayo cusub ee daaqadaha 10 qof walba waxa uu u sugaynaa qaabab file cusub iyo sidoo kale ciyaartoyda in iyaga ciyaari karo. In qof walba se weli ciyaari doono oo dhan saxmadda ay jecel yihiin in qaab MP4. Waa qeexidda fudud oo sare deg deg ah. Wixii 2015 waxaana dooneynaa inaad Liiska ku of 5 madal kasta, taas oo u shaqayn ugu fiican, sababta oo ah sababta aan.
VLC uu yahay laacib il furan oo ay tahay kama dambaysta ah ee il furan oo qaab xor ah ciyaartoyda MP4. Waxaa ma ahan oo keliya ayaa la ciyaari doonta MP4 laakiin wax kasta oo aad tuuraayo ee jidka oo dhan ilaa ugu sareeya ee qaabab. Laga soo bilaabo mp3 si avi, xvid, MP4, si mkvs. Available in 48 luqadood, qof kasta tari kara tan aan faa'iido doon ahayn. Ciyaaryahanka VLC sidoo kale waxaa laga heli karaa guud ahaan dhufto ee badan oo ay ku jiraan dhufto ee Android, macruufka, Windows iyo Linux. Waxaa intaas dheer in in ay u furan tahay hargaha iyo customizations badan si aad u dareento nafis mar kasta oo naf dhibkeed. Ciyaaryahanka VLC yimid ciyaaray la brand gui cusub ee Windows 8 version iyo kulminna badan iyo qaabab video ah aysan waafaqsaneyn daaqadaha 8 sida: Blue-ray, DVD iyo VCD. Ka taxaddar in kastoo ay sida ugu badan halkaas, ayaa rajeynaya inay lacag ku macluumaadkaaga shakhsiyeed, gunti ciyaaryahan VLC ay la socdaan bloatware kale ama furin si aad Doqon. Dhamaadka sharaxaad kanuna waa magaca sameeysa iyo website jeceshahay in aad la socoto kaa caawin. Waxa ay ku yidhaahdaanna ma VLC ma laha tartanka, laakiin in halkii model-oolnimada iyo fududaato in la isticmaalo guud ahaan dhufto ee waa doorashada ugu caansan sameeyo.
SMplayer sidoo kale waa ciyaaryahan cross madal ka dhigaya ilaa u ka dhinac madow ee ciyaaryahan VLC. Taasi waa qaab midig. SMplayer laga yaabo in ay kaliya loogu talagalay in lagu derejeeyo dadka kale ee waxqabadka keliya. Iyada oo ay size soo socda in ka 80MB super-featherweight caleemo aad dareen weyn oo ku saabsan meel disk iyo sidoo kale awoodda aad dhexsocoto fudayd madal codec guud ahaan. Its processor isticmaalka waa in ka yar kala badh in ka mid ah VLC ciyaaryahan, taasoo la dafiri karin, waayo buug miisaaniyadda iyo suuqa desktop. Waxaa sidoo kale haragga ka customizable laakiin awood fiican joogi badan Robbie Williams iyo sidoo kale, sida ururka ka horeeyey, wuxuu bixiyaa tiro balaadhan oo ah waafaqsan Cinwaan. Aan si foolxuno video ciyaaryahanka adduunka ee il furan labaad ee ugu fiican
The Sasquatch ciyaartoyda warbaahinta. Nasiib daro dad badan ayaa sheegay in ay tani waxaa laga yaabaa in sidii uu mid marwalba ka soo baxay ayaa kaalinta koowaad ciyaartoyda MP4 sida lacag la'aan ah ay sabab u tahay bloatware iyo waxyaalaha sort sida ay caan ah sida ciyaaryahanka ugu weyn ee warbaahinta ku yaalla koonfurta Korea oo dhaafta, Waxaa aad Breezy in ay isticmaalaan xitaa haddii in yar oo la yaab leh si ay u Mudanayaasha. Waxa aanu u muuqdaan in ay daneyneysaa oo dhinaca degdeg ah, laakiin sidoo kale ka dhigaysa ilaa uu ku leeyahay jeer load.
Waxa aanu wax walba oo aan ka ciyaaro, laakiin ma ciyaari maydhan biyaha si fiican wax walba dhow iyo haddii uusan ciyaari karo waxa aad leedahay waxa macno ahaan lagu daahfuri doonaa raadinta ah codec dhaw laga yaabo inuu u ciyaaro aad wax .. Waa ciyaaryahan soo baxa South Korea, iyo waa qayb ka mid khasab ah barnaamijyada ay ciyaarta daawanayay online. Your xubin u baahan tahay si xor ah loo soo dajiyo ciyaaryahan Gom inclusively. Marka ugu horaysa socda ciyaaryahankaan galay ahayd StarCraft 2 horyaalka warbaahinta VLC. Shaqsi ahaan waxaan kuu sheegi karaan waxaan daawaday oo dhan durdurrada kuwa HD 1080p la dillaaco lahayn, warbaahinta live. Shaki la'aan ciyaaryahanka Gom waa ciyaaryahan aad u awood leh codecs badan.
4-daydo ee PotPlayer
PotPlayer by daydo waa sii daayo cusub domain ciyaartoyda video daaqado gudahood. Sida la soo sheegay in ay dominator cusub ee goobta waxa aanu wax ka mid ah oo u taagan kor ku xusan dadka kale laga yaabaa in aad rabto in aad eegno sameeyo. Its kala duwan oo ka mid ah qaabab waa sida ballaaran sida tartame ee ay. Waxa aan u oggolayn kala duwan harag caadadii sida ballaaran, laakiin waxa ay kor u uu ku leeyahay awoodda ay leedahay in lagu siiyo macros keyboard kala duwan si ay u xakamayso qalab iyo sidoo kale xusuusto meesha aad iska daayeen in video gaar ah. Qaar ka mid ah qaababka cusub waxaa ka mid ah ciyaaro wax 3D iyo sidoo kale, sida VLC, ciyaaro wax burburay. Daydo ee PotPlayer xaqiiqdii waa u tartamaya kulul.
Tani ciyaaryahan warbaahinta xorta ah kulminna soo baxay ee la soo dhaafay ciyaartoyda warbaahinta users bixi karo. Tani waxay si gaar ah ciyaaryahan warbaahinta ayaa waxaa ku suntan qof kaliya. Waxaa kor u sii taariikhda iyo qabtay laba qaabab kala duwan inay dadweynuhu heli karaan: version caadiga ah, iyo sidoo kale Edition Black kaas oo ku suntan inay si fiican oo dhakhso badan oo ka mid ah qaababka badan oo cusub. Ujeedada ugu weyn ee ka dambeeya media player this cad ahayd in lagu daro tartan iyo faa'iido laakiin waa Misbaax ku been in xaqiiqda ah in ay ka isticmaalaan sireed cusub video kaararka sii daayay in dardar doonaa loo maqli karo ee h.246 iyo VC-1 codec. Ciyaaro warbaahinta MP4 oo dhan dib u dhakhso badan haddii aad tahay qof ee suuqa sanduuqa ama buug cusub.
Mar labaad, waxaan arki furan-il kale ayaa ugu sareeya liiska ciyaaryahanka ugu qaab wax ku ool ah, sababtoo ah haddii qaabka ma ciyaari doono garoonka oo dhan - qaab dhaco, si eber, oo aynu wada ognahay sida xiiso leh in uu noqon karaa. Waa heerka tayo design aan la arkin in ciyaartoyda kale. Its Si sahlan loogu rakibo, xasiloonida sare, iyo la'aanta buuxda oo loo baahan yahay downloads codec Sidoo kale waxa ay doorashada ugu fiican ee dhigayaa # 1 ugu fiican ciyaaryahan xor ah Mac MP4. Haa, waxa ay sidoo kale diyaar u ah Mac OS of noocyo badan oo la ciyaari doonta kooxda kaliya ee ku saabsan wax kasta oo ku saabsan kaliya design iyo midabka. Waxaa xitaa xusa Bookmarks gaarka qarka u filimada. Ciyaaryahanka VLC shaki la'aan waa heerka xasiloonida dadka isticmaala inta badan ka.
Ciyaaryahanka DivX waa mid ka mid ah originators ee codecs cusub halkaas sidaas darteed waa la yaab ma laha in ay ciyaaryahanka u gaar ah ayaa muddo aad u jecel yahay hadda. Iyadoo codec ay hodan ku taageeraan inta badan kaliya tegi doonaa iyadoo ciyaaryahanka DivX iyo "qotomiyeen oo iloobin" tan iyo markii ay taageerto noocyo badan oo kala duwan oo files oo iyaga ka waddaa si cadaalad ah si hufan. Jeer Load on sanduuqyada iyo buugaagta ugu muuqdaan in ay ku tiirsadaan iyagoo dhinaca dhakhso ah wax kastoo, ma aha, waa dhaqsiyaha badnaa ee, laakiin Mac OS ah waxa ay hubaal waa ka duwan oo caan ah. DivX kale oo uu leeyahay in ka badan hal wax soo saarka ee suuqa sida Mac in Converter DivX iyo sidoo kale plugins u daalacashada internetka. Mid ka mid ah inaan aragno khasaare in ciyaaryahankaan gaar ah waa la'aanta ah ee modding maqaarka la heli karo si user dhamaadka, laakiin sida aan hadlo, iyagu waa marxaladaha fulinta design cusub si uu ula kulmo codsigan. All oo dhan aadan ka qaldan DivX ciyaaryahan Mac OS tegi karin
Next liiska ciyaartoyda warbaahinta waa ciyaaryahanka Elmedia heli Mac OS X dadka isticmaala oo dunida by Eltima Software. Tani waa run ahaantii, runtii, runtii, runtii, ma sheyga kaliya liiska software heli karaa Eltima ee, taas oo laga yaabo in lagu cabsiiyo ka mid ah oo idinka mid ah, laakiinse ciyaaryahankani waa idaad ah gebi ahaanba ka duwan ciyaartoyda kale diyaar u ah Mac ama wax kasta oo kale oo madal. Ka sokow idin siinayo dhameystiran u helaan guud ahaan kala duwan oo qaabab: MP4, FLV, Jabbuuti, XAP (Silverlight), RV, dhexena, MOV, AVI, iwm waxa kale oo uu leeyahay taageero flash buuxa ay ka dhisay browser u gaar ah! Waxaan gebi halis ah. Waxaad daawan kartaa filimada inta aad isticmaalaysa u filimada ka badan si ay u daawadaan. Waxaan lahaa HORTA aan kuu soo jeedinaynaa inaad baabuur waddo, halka tan sameeyaan isku mar laakiin tani waa ay feature One ugu iyo daacad ah ma aadaminimo tegi kartaa. Haddii tani ay tahay nooca khibrad aad raadineyso in aad filim daawashada markaas Elmedia waa waajib iyo go si media player.
5KPlayer sidoo kale waa warbaahinta ciyaaryahan cusub u Mac OS oo u muuqata in ay leeyihiin ay xagal gaar ah oo ku saabsan suuqa Mac ah. Ciyaaryahanka Tani waxay u muuqataa in ay sameeyaan inta badan waxa aad ka filan lahayd ka ciyaaryahan xor ah ugu taageero codec laakiin wareejin asalka ah ee lagu iibiyo suuqa ciyaaryahan Mac lacag la'aan ah wax yaabahan ah oo lagu magacaabo Airplay. Habkaani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qaadato files warbaahinta liiska iyo iyaga qulquli on Airplay in kale. 5kplayer waxay leedahay qaar ka mid ah sifooyinka kooxda kale sida in ay u soo bixi warbaahinta ka YouTube iyo Facebook awood, iyo sidoo kale iyadoo la isticmaalayo 5k in dhegayso raadiyaha. Si aad kuwa muuqaalada B-dhinac waxaan la soco 5kplayer boggayaga liiska sababta oo ah feature Airplay taas oo ah calaamad xiiirka cusub.
Tani waxay u muuqataa in ay halbowlaha u ah dad badan oo isticmaala Mac OS, oo ay kasbatay si, sida ay tahay mid aad u deggan oo ku yimaadda prepackaged kaliya xaddiga saxda ah ee ka kooban qaddar xilliyeedka. Qaabab ay playable yihiin quruxsan ballaaran. Bottleneck kaliya ee ciyaaryahankaan la sii ballaadhan oo aan loo isticmaalo waa in ay tahay oo kaliya laga heli karaa 5 ama 6 luqadood. English, Hungary, Poland, Ruushka iyo Spain oo aan dunida oo dhan ay kubad dheer. Ma jiro mid ku yar haddii ay dhacdo in aad ku hadli mid ka mid ah sida aad si aanay u tarjumidda qodobkan markaas in waa in aanay noqon dhibaato. Ciyaaryahanka MX waa in u istaagaan yara inaga boggayaga liiska laakiin run ahaantii ka maqan dawannada iyo foodhi dhammaan waxyaabaha kale ee la hore u soo tuurayaan in la siiyo ay alaabta ku laayeen oo VLC hore iyaga kulan xasiloonida iyo caan cross-madal. Diiray laakiin xasilloon oo ku imanaya si ay noo tirada 5 rigoore iska soo nadiifiso tartanka Mac OS ciyaaryahan MP4 doorashooyin.
Maanta waxaan ku nool nahay da'da digital laakiin dadka weli ku jira aadanaha (ama ugu yaraan inta badan oo inaga mid ah) taas oo macnaheedu yahay inaanay kulligood inaga mid la soo gabagabeyn doono in ay godka korontada 24 saacadood maalintii ... ama ugu yaraan aan ilaa laga sii deynayo buuxda oo spectrum of VR Sims daaqadaha ku dhufan doonto suuqa. Illaa maalintaas yimaado (oh oo doono) waxaana dooneynaa inaan noqdo, isla jir ah, dadkii ku biiro waxaana mar walba oo tan iyo markii aan had iyo jeer tahay dhaqaaqo, waxaan u baahan nahay liiska ugu sareeya 5 macruufka MP4 ciyaaryahan xor ah.
Oplayer waxaa bilaabo ilaa qaabeeyo sida eey oo hogaanka tartanka this. Iyada oo qaabab file badan oo isticmaali karo by codsigan oo lacag la'aan ah waxaad la Yaabteen doonaa sababta dadka isticmaala wax kale u isticmaalin. Iyadoo in ka badan 4 noocyada kala duwan ee qaabab il awood u layaabna ma ciyaartoyda kale helay, adood oo ugu sareeya. Ciyaaryahanka Tani waxay sidoo kale waa u hagaagsan iyada oo loo marayo awood USB iPad iyo content bixi karo iyada oo Wi-Fi waxa ay sidoo kale bixisaa tv warbaahinta soo baxay awood iyo airplay. Just in ay soo wada off Oplayer ka mid ahaa kuwan raadkaygay audio badan qoosho wax. Astaamahani waa si aada waa badass ee dhammaan dadka isticmaala iPhone in ay yihiin gen3 kor ku xusan iyo sababta ugu weyn Oplayer waa aqbalay by kale ciyaartoyda il furan.
Next ilaa boggayaga liiska waa ciyaaryahan kale oo uu jecel yahay taageere loo yaqaan rockplayer2. Bixiyo dukaanka tufaax ka sameeysa la odhan jiray Shanghai Tech Co. ciyaaryahan Tani caadi ahaan waa jilbaha shinnida ee marka ay timaado ciyaartoyda ku qaboojiyo. Waxaa xitaa ka heli doontaa download iyo rakibi buugga Jidka idiin markii ay u yeedhay si aad qalab macruufka ah. Waxaa laga yaabaa in aan leeyihiin dareen buuxda qaab codec laakiin waxaa ka badan ka dhigaysa ilaa waayo, in hannaanka loo yaqaan RockShare. Tani waa faraha dhagax weyn oversized in incantation samo kuu ogolaanaya in aad si toos ah warbaahinta aad la yeelanaysid dadka sidoo kale la isticmaalayo Rockplayer2 la riixo ah badhan wadaagaan. Ma heli karaa cadaabta a ya! Habkaani keliya waa wixii Rockplayer2 madaxa iyo garbaha ka dhigaysa kor ku xusan ay tartan puny. Qabka Taas oo uu sheegay waxa aanu ku siin qaybsi warbaahinta via Lugood, FTP, http, dav iyo sidoo kale AirPlay. Waxa muuqata sida horumarinta badan ee Shanghai Tech ogaaday waxa ay dadku dhab ahaantii doonayey.
Tani ciyaaryahan warbaahinta kale ayaa mid ka mid ah ku guulaystay abaalmarina badan iyagoo u iPhone warbaahinta ugu fiican ee ay Lifehacker. Wixii xaqiiqda fudud in inkasta oo ay aad u jecel waxaa laga yaabaa in dhagax weyn wadaago warbaahinta ama xataa dhamaystiran koontarool aad waayo-aragnimo daawashada via helaan warbaahinta fog, aad wali cunayo ilaa batari iPhone aad ee geedi socodka. Oo waxay xoog waa kama dambaysta ah ee adduunka ee madadaalada mobile. Marka dhan joogsato ciyaaryahankaan shaqayn doona isku aadka batari la mid ah sida ishiisa inankeeda, ciyaaryahanka warbaahinta u gaar ah laakiin la ah laba muuqaalada dheeraad ah in aan marnaba laga yaabaa in aad u malaynayso in aad ka maqnaan doono. Tusaale ahaan aheyn u qaadeysa saldhig heer audio in 12x. Habkaani kulan la hufnaan batari waa dahab ah ee aan kitaabkayga sidii ay jirto warbaahinta u badan ayaa waxaa Daran goobaha asalka mugga. Xitaa ma daawan karo filim dambe fadhiistay in qof laga yaabo in hargab qabto. 2 ama 3 hindhiso muhiimka ah ayaa awood u leh in jiidaan movie dhan IYO NOLOSHA. Si kastaba ha ahaatee waxaa jira qaababka kale diyaar u ah kuwa doonaya in ay u guuraan meel ka baxsan diilinta ganaaxa tufaax NRC. Player Ba'an ogaadaa UPnP inay sii qulquli content desktop ama warbaahinta server si aad ku raaxaysan karaan faylasha oo dhan xaq u flippen 'hadda ... All oo dhan badal weyn oo mudan ee ah tirada 3 rigoore ah ee horyaalka Ingariiska.
Waxaan mar kale arkaan ciyaaryahan kale oo ku tiirsan feature airplay si aad u hesho inta badan ka soo qaadaan waayo-aragnimo la daawado ah. Dad badan oo dadka isticmaala hadda wareegaya Airplayit ka km ciyaaryahan sababtoo ah taageero la'aan ka Wi-Fi warbaahinta iyo mid ka mid ma isku xirto kartaa scalability warbaahinta Wi-Fi ka dibna isu Airplay. Tani pocus hocus digital sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in ka badan sidoo kale shabakadaha 4G / 3g. AirPlayit ku faantaa 320 qaab file codecs ay in la huleeshay karaa iyada oo airplay. In kastoo ay design ma fududa on indhaha waa cajiib fududahay in la fahmo in aad tahay shaqaale ee aad leedahay content. Noocan ah steel sugaya kuu ogolaanaya in aad si deg deg ah u aragtid waxa aad u hayso ama aan. Ilaa hadda waxaa aan ku cabashooyinka ballaaran jeer jawaab ama awood version laakiin waxaad u baahan doontaa gen 4 iPad ama wax ka sareeya. Dhammaan sheegay oo soo gabagabeeyay AirPlayit ma aha kariimka ah dalagga laakiin waxa aad u oggolaan doona in ay gacanta aad u baahan tahay la isku hallayn leh ee sameeysa asal ah.
Ciyaaryahan kale oo weyn oo aad ku siin doonaa tan oo caymis waa ciyaaryahan KM. Bedelaadda aad ciyaaryahan asal Lugood leh ku yeelan doontaa in aad daawashada nooc kasta oo ka mid ah content aad doorato in aadan tufaax kaliya warbaahinta lahaansho. Waa ujeedooyin gaar ah dhacsan sida ay hadda u muuqataa in ay u gaabiyaa ka kooban newish laakiin aan ahayn in ay tahay mid ka mid ah kuwa kale oo kaas oo laguu ogolaado in aad si aad u hesho ka mid ah cududdii Apple macruufka warzone u lahaansho. Liiska codecs waa ballaaran iyo hadii uusan ee kala carar cusub u dhigo waxaa ka sareeya liiska. Ciyaaryahanka Km waa ciyaaryahan loogu talagalay awood toos ah guud ahaan dhufto badan oo kala duwan sida ciyaaryahan VLC laakiin aan wax qaababka kale, sida airplay ama UPNP, waxaa kaliya oo aan loo ogolaan karaa wax ka sareeya ee qiimeynta bilaha our.
Iyadoo android uga sii hackable oo dadweynaha u furan, rabitaanka Chine in ay bixiyaan warbaahinta server xirmaan awood waa wax badan ka yar. UPNP, hore ayaa inta badan ay taageerayaan android ayaa sidoo kale SDK qalabka iyo goobaha sameeysa ogolaan waxyaabaha sida FTP file. Cajalad lahaansho No si ay u dhinto halkii halkan ku odhan sidaas darteed waan arki doonaa yar ee hit ah ka mid ah bulshada android. Sidaas for our liiska si aannu u aragno xoogeystay ee isha geesiga furan ee sida sare halka liiska arrimo badan ka yar tahay in hits Oplayer ay yihiin.
Ciyaaryahanka MX soo laabtay aarsasho ah! Markan waa sifooyinka zoom taabto taas oo ka dhigi u taagan iyo sidoo kale qaabab loo maqli badan ogolaada in ay qaadan kaalinta madaxa. Sidoo kale waxa ay leedahay shaqeynta badan oo ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee ay isagoo shaashadda weyn ee sidaas ma jirto baahi loo qabo in kalluumaysto agagaarka iyaga aad ujecel markii filim qiimo leh. Tani waxaa ay ka mid tahay Nuurkii screen, goobta doonaya, mugga iyo xasil oo dhan dhisay in taabashada shaashadda. Waxay leedahay taageero badan Cinwaan sidoo kale ay awoodaan si loo soo dajiyo oo dhan codecs baahan yahay ciyaaro ku dul rakibi sidaas u baahan tahay saacado ah kaluumaysiga codecs saacado ama diidmo kaliya guri ka mid ah filimka .. ciyaaryahan MX run ahaantii ay qaadanayso in la waslad khafiif ah oo la model sanadkan ee oo aan ma noqon karaan kuwo faraxsan ayay ku sameeyeen.
Developer: J2 is-dhexgal
Marka dhamaan ciyaartoyda warbaahinta kale ee Android lagu palmed mid siinayaa in yar oo dheeraad ah helitaanka. App aan ka hadleyno dabcan waa Archos. Archos waa kiniin loogu talo ah software ka dhigay karoos hadda model oo waxaa laga heli karaa suuqa android. Its feature ugu weyn waa uu u muuqataa sida ay tahay gui waa quruxsan oo kor ku xusan inta kale. Prepackaged la buuxda 5.0 taageero hurdiga ah. Sidoo kale waxa ay u oggolaanaysa in warbaahinta la qaadi karo xiriir server oo hore u yimaado preprogrammed oo dhan qaabab xirka loo baahan yahay ay ka mid yihiin (SMB, UPnP, FTP, SFTP) ama ka qalab lagu kaydiyo USB dibadda ah (SFTP / FTP helaa oo keliya qaddar / bixisay app version); waayo, video yanking ka desktop to top telefoonka aad. Haddii aad warbaahinta waa Karootada Top ... markaa waxaan rajeynayaa maamuuska ma waxaad caawisaa, aad 'gisida. Iyagoo keliya ma aha in, laakiin sida kuwa goor dambe qaar ka mid ah ciyaartoyda warbaahinta ayaa hadda fulinta blockers warbaahinta torrent. Sidee tani hoos u dhaco ayaan xitaa ma aqaan laakiin ay haa tahay waxaa suurtagal ah iyo The guys ee Archos ayaa saadaaliyay in koofiyadaha burcad badeedda iyo oggol yahay loo maqli karo dhammaan faylasha hore torrented (inkastoo torrenter waxaa guraa la app) dhaqaaqo siyaasadeed ee waaweyn oo keli ah warbaahinta ah ciyaaryahanka. Haddii ay aad xuquuqdeeda in keliya ciyaari idiin eryo xaq u leedahay in ciyaaryahan warbaahinta Archos ama isla markiiba waxaa ka soo ...... .ama qarsoodi ah in ka dib markii aadan tahay agagaarka saaxiibo aad dagaalanka burcad-badeeda.
Waxaan mar kale arko liiska ciyaareed ee ciyaaryahan taxday liis ay ku. VLC waxaa laga heli karaa haatan qaab beta oo isku dayaya in ay seddex-hat la madal android. Ma u badan tahay inay ku dhawaaqdo sida shaqo la halkan sameeyo laakiin ilaa hadda gui waa sida joog u guys jeclaan badan ee VideoLan. Iyada oo ay bandhigay orange dhalaalaya iyo warbaahinta liiska ka dhisay sidaas ma aha in aad loo kalluumaysto for files, iyo sidoo kale awoodda geeyo network, waxay u muuqataa in ay xaq tahay oo ay. Codecs badan oo kala duwan oo la soo halkan guraa horay iyo runtii waxaan Ma sugi karo inaan arko waxa ay ku dhamaysan doono ilaa la. Waxaan qabaa haddii aad weydiiyay guys waxa VideoLan ayaa ah hal ku dhiga ah ee beta sii daayo tani waa waxay dhihi kartaa wax u eg "Ma neceb ciyaaryahanka ... ..hate ciyaarta."
Waxaan ilaa hadda ma tegi karin oo aan sheegin ciyaaryahan KM sida caadiga ah madal android. Waxa kaliya ka dhigayaa mid aad u fudud. Haa mar muuqaalada Ngcuka ama bloatware iyo haa mar kale oo dhan caymiska codec wanaagsan. 350 milyan oo downloaders ma noqon karo khalad. App Tani xitaa dabooli doonaa qaabab ka weyn oo mx iyo VLC laga yaabaa in aan xitaa la aqoonsado. Laakiin waxay leeyihiin khasaaro aan ku qoran sida workarounds uma sahlana ac3 taas oo ah qaab ah loo qaybiyey. Waxa aanu la iman taageero drive google oo uu ka mid yahay ciyaartoyda warbaahinta yar oo u oggolaan waayo, xaalka birtiina windowed si aad u yeelan karaan dhaqdhaqaaqa. Guud ahaan ma dulmiyo waxaad tegi kartaa mid ka mid ah 5 hogaanka u android iyo haddii aad ku shubmaan arrimaha halis ah markaas aad karto wareega hal iyo arko haddii mid ku haboon qalab gaar ah oo aad. Haddii aad arrinta waxaa ka jeelahay warbaahinta ugu sareysa karooto ... .oo oo kiiska ma jiro shaqaale maskaxda ku filan aduunka .... KM Player xaqiiqdii waa xoolaha codec la abaalmarinno qaar ka mid ah iyo waxa aan arki karnaa dhawaan dhaqan galin doonta naqshado xitaa jilicsanaan in bilaha soo socda.
Sida la surin-oop liiska ku daray ciyaaryahan BS in ay tirada 5 rigoore u MP4 android loo maqli karo software free video. Haddii ay dhacdo in aad dareemay waxoogaa cased in ay qaab-dhismeedka ka mid ah ciyaaryahanka kale ee ciyaartoyda warbaahinta BS waa ciyaaryahan adag la taageero maqaarka. Haa ... xorriyadda .user. Si aad doorashada jive si ay u tagaan Droid in meesha ugu horeysa oo waxanuna waa waxa BS ku bixinayaan in malaayiin downloaders ay. Sidoo kale ciyaaryahanka this gaar ah ma jirto doofaar on awood processor. Juice More ka dhigan tahay Bro farxad. Waxaan shakhsi ahaan la kulmay kanu goobo bulsho gaar ah gudahood. Waxaan lahaa saaxiib la batari iphone5 laga cabsado. Waxa uu si joogto ah careysan Cadho. Joogto xun. Markaas maalin maalmaha ka mid waxa uu ahaa gabi ahaanba kamidka ah ... Wararka sidii balanbaalis ah. Waxaan weydiiyay "hey Bro waxa bedelay ... .Waxa aad mooddaa in, kala duwan ..." ayuu yiri "Waxaan jeclaan lahaa ya, Waxaan iibsaday ah iPhone batari cusub oo hadda waxaan ahay qaboowga sida qajaar ah." Casiirka, marnaba dhayalsan xoogga awoodda. In light in app this waxa uu aad samayn mid ka mid ah oo ku saabsan nolosha batteriga. BS Player waxaa sidoo kale la qooqaya ay taageero buuxda u YouTube si aad u soo dejisan kartaa kasta oo dhan YouTube videos aad leedahay meesha bannaan ee loogu talagalay in ay gaari ku adag iyo sidoo kale suuqa kala ah resizable u daawado iyaga oo cabbirka aad rabto. Qaar badan oo dadka isticmaala android ka hadleynaa waa lagu dhisay awoodda Cinwaan iyo sidoo kale in ay shaqada si ay u baadhaan content aad horey u for subtitles ka repositories. Ma hubo sida hawlaha laakiin BS ciyaaryahan idiinku yeedhi inaad hesho gacmahaaga wasakh leh line amarka buuxa helitaanka. Kuwan oo dhammu waa hawlaha weyn ee ay xaq u gaar ah, waana sababta aan dhamaaday ciyaaryahanka BS sida ay leedahay wax badan oo plusses xitaa haddii aysan u leeyihiin shaqeynta buuxda ee ciyaartoyda ugu sarsareeysa.
Developer: kooxda AB
Qaybta 2. Download Free Videos la Wondershare AllMyTube